ပုံများတွင် LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts အိုင်ကွန်များ D2C
05 / 08 / 2021 05 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 450 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Hedwig, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, ပါမောက္ခ Dumbledore, ပါမောက္ခ McGonagall, Rubeus Hagrid, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား
မျက်မှန်ကိုတပ်ပါ၊ ကြိမ်လုံးကိုဝှေ့ယမ်းပြီး Hogw ကိုလက်မှတ်ထိုးပါartအသစ်ထွက်ပေါ်လာသောကျွန်ုပ်တို့၏စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံပုံပြခန်းတွင် s စာ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု.
Wizarding World အနှံ့မှမယုံနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ကျသောတည်ဆောက်နိုင်သောအရာဝတ္ထုများကို စုစည်း၍ အပိုင်း ၃,၀၁၀ ကိုတိုက်ရိုက်စားသုံးသူအစုံသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာကိုယူဆောင်လာသည်။ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀၂၁ အတွက်တန်းစီသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရွှေ minifigures သုံးခု (Dumbledore, McGonagall နှင့် Hagrid) တို့ကြောင့်နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်သော်လည်းဤနေရာတွင်အဓိကဆွဲမှာကသေချာသည်။
၎င်းသည်သက်ရှိကဲ့သို့သောမျက်မှန်များ၊ ကြိမ်လုံးများ၊ Golden Snitch စသည်၌သာမကမှုတ်ထုတ်လိုက်သော Hedwig ၏အသေးစိတ်နှင့်သဘာဝအပန်းဖြေမှု၌သာမက မနှစ်ကစက်မှုပုံစံ တည်ဆောက်နိုင်သောဆေးပုလင်းငါးလုံး၏အညွှန်းများနှင့်အကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င်အသေးစိတ်အချက်များတွင်ရေမှပါ ၀ င်သည်။ ရှုထောင့်တိုင်းကိုအနီးကပ်ကြည့်ရန်အောက်ပါပြခန်းကိုကြည့်ပါ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု.
သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်ဝေမည့်ရက်အပါအ ၀ င် ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်းမရ။ ငါတို့မှာမှော်သင်္ကေတတွေလက်ထဲမှာရှိနေပြီ၊ ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာပိတ်ဆို့မှုရုတ်သိမ်းတာနဲ့ငါတို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်ကိုထုတ်ဝေလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်မျက်လုံးတစ်လုံးကိုသေချာစိုက်ကြည့်ပါ။ Brick Fanatics.